Atụmatụ nlekọta ụlọ ịsa ahụ - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Atụmatụ nlekọta isi ịsa ahụ
1. Kpọọ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ ka ha rụọ ụlọ na ntinye. Mgbe ị na-etinye, ịsa ahụ kwesịrị ịgbalị ka ọ ghara ịkụ ihe ndị siri ike, ma ghara ịhapụ ciment, gluu, wdg n'elu, ka ọ ghara imebi gloss nke mkpuchi elu. Lezienụ anya n'ụzọ pụrụ iche na ntinye mgbe ị wepụsịrị ihe mkpofu na pipeline, ma ọ bụghị ya, ọ ga-eme ka ịsa ahụ kwụsị site na ikpochapu pipeline, nke ga-emetụta ojiji.
2. Mgbe nrụgide mmiri na-erughị 0.02mPa (ie 0.2kgf / cubic centimeters), mgbe a na-eji oge eme ihe, ọ bụrụ na achọpụtara mmiri na-ebelata, ma ọ bụ ọbụna gbanyụọ ọkụ mmiri, enwere ike itinye ya na Mwepu mmiri nke ịsa ahụ jiri nwayọọ wepụ ihe mkpuchi ihuenyo iji wepụ adịghị ọcha, ọ ga-agbakekwa n'ozuzu ya. Mana cheta ka ị ghara ịkwasa n'ikeisi mmiri mmiri. N'ihi mgbagwoju anya esịtidem Ọdịdị nkeisi mmiri mmiri, Mgbasa mmanye na-enweghị ọkachamara ga-eme ka isi mmiri ịsa ahụ ghara iweghachi ihe mbụ.
3. Ejila ike dị ukwuu mgbe ị na-agbanye ma ọ bụ gbanyụọ faucet ịsa ahụ ma na-edozi ụdị ịgba mmiri nke ịsa ahụ, naanị gbanye ya nwayọọ. Ọbụna ọkpọ mmiri ọdịnala anaghị achọ mgbalị dị ukwuu. Lezienụ anya n'ụzọ pụrụ iche ka ị ghara iji aka mgbanaka na akwa ịsa ahụ dị ka okporo ụzọ aka iji kwado ma ọ bụ jiri.
4. Ọkpụkpụ ígwè nkeisi mmiri mmiriEkwesịrị idobe tub ịsa ahụ n'ụdị gbatịa eke, ma ejirila eriri mmiri kpuchie ya mgbe ọ naghị eji ya. N'otu oge ahụ, kpachara anya ka ị ghara ịmepụta akụkụ nwụrụ anwụ na nkwonkwo n'etiti eriri na ọkpọkọ, ka ọ ghara imebi ma ọ bụ mebie eriri ahụ.
Nke gara aga:Akpachara anya maka ntinye na nyocha nke eriri ịsa ahụ
Osote:Nhazi nke isi ịsa ahụ